အောင်လံတွင် ကြက်သွန်နီ မျိုးစေ့ထုတ်ခြင်းနှင့် ကြက်သွန် ပျိုးထောင်ရောင်းချသူများ တွက်ခြေက? - Yangon Media Group
အောင်လံ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၆
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်လံမြို့နယ် အတွင်း ယခုအခါ ကြက်သွန်နီစိုက် ပျိုးရာသီချိန်ဖြစ်သဖြင့် ကြက်သွန် နီမျိုးစေ့ထုတ်ခြင်းနှင့် ကြက်သွန်နီ မျိုးပျိုးထောင်ရောင်းချလုပ်ကိုင် သူများမှာ တွက်ခြေကိုက်လျက်ရှိ ကြောင်း ကြက်သွန်နီစိုက်တောင် သူများထံကသိရသည်။ ”အခုဒီမြင်နေရတဲ့အခင်းက ကြက်သွန်နီမျိုးစေ့ထုတ်ဖို့ စိုက်ပျိုး ထားတာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်းကြက် သွန်နီစိုက်သလိုပိုအောင် ပျိုးထောင် ထားတဲ့ဟာက ရောင်းချဖို့ဖြစ်ပါ တယ်။ ကြက်သွန်နီမျိုးစေ့ထုတ် တာရယ် ပျိုးထောင်ရောင်းတာ ရယ်ကပိုက်ဆံပိုရပါတယ်”ဟု ရွှေ ညောင်ပင်ကျေးရွာမှ တောင်သူဦး သန်းကြိုင်ကပြောသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ကြက်သွန်နီစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း ကို ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာ မိုး ကောင်းကျေးရွာ၊ဥယျာဉ်ကျေးရွာ စစ်အောင်ကျေးရွာနှင့် ရေနံကြီး ကျေးရွာများတွင် အများဆုံးစိုက် ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပြီး ချောင်းအတွင်း သဲသောင်ခုံများတွင် စိုက်ပျိုးခြင်း ကို ရေကြက်သွန်ဟုခေါ်ပြီး ချောင်း အနီး ယာကွက်များအတွင်း ရေသွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းကို ကုန်းကြက်သွန်ဟု ခေါ်ကာ ကုန်းကြက်သွန်နီက တာ ရှည်အထားခံကြောင်း သိရသည်။ ”အခု ကြက်သွန်နီမျိုးက ရွှေ ဖလားထိပ်မောက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးစေ့တစ်ပြည်ကို တစ်သိန်းရှိပါ တယ်။ ကြက်သွန်နီတစ်ဧကစိုက် မယ်ဆိုပျိုးထောင်ခထွန်စက်နဲ့ ထယ် ရေးပြင်တာ ပိုးသတ်ဆေးကျွေးတာ မြေသြဇာနဲ့စိုက်ခကျင်းဆွဲ စုစု ပေါင်း ကျပ်ခြောက်သိန်းလောက် ကုန်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီပေါ်စ မှာတစ်ပိဿာအနည်းဆုံးကျပ် ၆ဝဝ လောက် ရရင်ကိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ အောက်ကျရင်တော့ ပွတ်ကာသီ ကာပဲမြတ်မှာပါ” ကြက်သွန်နီစိုက် တောင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ကြက် သွန်နီမျိုးစေ့တစ်ပြည်ကျပ် တစ် သိန်းဈေးရှိပြီးတစ်ဧကနှစ်ပြည် စိုက်ပျိုးရကာကြက်သွန်နီပျိုး ထောင်ခြင်းကို ၁၅ ပေပတ်လည် ကျင်းအတွင်းထယ်ရေးပြင်ခြင်း မြေ ခံခြင်းပိုးမကျစေရေးအတွက် ပိုး သတ်ဆေးကျွေးခြင်းနှင့် ပျိုးထောင် ကာလရေလုံလောက်စွာရရှိရေးအ တွက် ရေပိုက်ဖျန်းစနစ်များဖြင့် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြကြောင်း ယခုအ ခါ ကြက်သွန်မြိတ်ရောင်းချခြင်းနှင့် ကြက်သွန်နီဥဖြတ်ရောင်းခြင်းကို လည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ တစ် ပိဿာကျပ် ၅ဝဝ ရသဖြင့် တွက်ခြေ ကိုက်ကြောင်းသိရသည်။
ဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူ ဂျိုရှုဝါဝမ်ကို နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်အဖြစ် အမေ??
ဆိုမာလီယာမြို့တော်တွင် ကားဗုံးပေါက်ကွဲ၊ အနည်းဆုံး ၂၂ ဦးသေဆုံး
ပေါ့ပီပန်း မဝတ်ဆင်ခဲ့သည့် အကြောင်းရင်းကို မာတစ် ရှင်းလင်၊း ဖာဂူဆန် လက်ထက် စိတ်ဓာတ်မျိုးပြ??